IPako, umdlalo olula kunye nolonwabo oya kukuloba | I-Androidsis
Amapolisa aleqa noPako, umdlalo olula, umlutha kunye nokuzonwabisa we-Android
IPako ngumdlalo omnandi, olula kunye nomlutha oya kusisa kuwo Izitalato zedolophu ukuzama ukuphepha amapolisa, esisukelayo sizama ukunqanda iinzame zethu zokubaleka.
Eminye imizobo yevektha, eneempiliso eziphumeleleyo kunye nefiziksi yento ephumeleleyo, iya kwenza iPako Car Chase Simulator yenye yezona midlalo zinomdla kwaye zilula onokuzibona kwi-Android. Abo baphathe ngobuciko imizobo ye-3D nge Umdlalo ophefumlelweyo ophefumlelwe yinto ethile kwiFlappy Bird, iya kukuzisela umdlalo olungileyo simahla ongenakukuphosa kwi-Android.
1 Umdlalo oqhelekileyo wezona zilungileyo
2 IPako yeMoto yokuSukela iSimulator
3 Kwaye ngaphezulu kwasimahla
Umdlalo oqhelekileyo wezona zilungileyo
IPako ngumdlalo ongayi kushiya nabani na ongakhathaliyo kwaye nangona isenokungafikeleli kwinqanaba leminye imidlalo yemoto, Ingqangi ilula kakhulu kwaye igcina kumnandi kakhulu, ukusukela mzuzu esingqubana nesithuthi sethu, kuya kufuneka siqale phantsi. Njengoko kuya kwenzeka ukuba singene kwisibane okanye olunye uhlobo lwento.
Kulapho afumana khona ukukhuthazeka kuFlappy Bird, njengoko kufuneka silumke siphephe yonke imiqobo, landela indlela kwaye singavumeli nayiphi na imoto yamapolisa ukuba ingene kwindlela yethu kufuneka iqale umdlalo. IPako ivela kwiWindows Phone kwaye sele ilinde ukuba uyifake kwi-Android yakho.
IPako yeMoto yokuSukela iSimulator
Okwangoku xa uqala iPako, uya kujongana nobuhle obunokubuyiselwaNxibelelana nezo bhanyabhanya zemoto kwii-60s kunye nee-70s kwaye iphinde ivelise iqela lophuhliso ngasemva kwalo mdlalo ulunge kakhulu.
UPako ugqamile ngenxa yesi sizathu, ngokucacileyo ngumdlalo ukuba amagwegweAyisiyonto yokuba inemizobo ye-state-of-the-art kodwa kwinto ethengisa ngayo, iyenza kakuhle kakhulu, kuba ukusetyenziswa kwemizobo yevector ngombono we-isometric kuyenza umdlalo ongena emehlweni kakuhle. Ngaphandle kwezinto oopopayi kunye nefiziksi, indlela elula ngayo, ikwakhona ukuya emsebenzini.
Ukuya kuthi ga ngoku kumdlalo weqonga, ukuthatha inkuthazo kwiFlappy Bird, kufuneka uqale phantsi kwakhona, kuya kukufumana uxakekile okwethutyana. Inazo nezinye iindlela zomdlalo ezibandakanya iintlobo ezahlukeneyo zezithuthi ezinjengee-limousine okanye iveni. Ngaphandle kokuba kunjani ukoyisa imiqobo endleleni Siza kuba namapolisa (kunye neZombi), nangona kungekho nzima ukuyiphepha, iya kuzama ngandlela zonke ukuba ixesha lomdlalo lifinyele ngokwaneleyo.
Kwaye ngaphezulu kwasimahla
Emva kokuphawula kancinci malunga nokuba yintoni iPako, ngoku kuhlala kuphela ukuze sazi ukuba sijamelene nomdlalo ohlawulelwayo okanye wasimahla, ukhetho lokugqibela lukhetho olukhethiweyo, nangona Ukuthenga ngaphakathi nohlelo ukususa intengiso izakuvela ngoku sidlalayo.
IPako ngumdlalo olula kakhulu wokuzonwabisa kwaye kulapho ifumana khona bonke ubukhulu bayo. Imizobo eya kuthi isitsibe, imoto ekuvumela ukuba uqhube ngokugqibeleleyo kwaye izinto zangaphandle ezahlukeneyo kuthi abaya kuzama ukwenza izinto zibe nzima kuthi.
IPAKO-Ukuleqa iMoto kweSimulator
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Amapolisa aleqa noPako, umdlalo olula, umlutha kunye nokuzonwabisa we-Android
IMediaTek ilungiselela iprosesa ezimbini ezintsha
IAmazon yazisa ngeTV yoMlilo, okhuphisana nayo kwiChromecast